Home Wararka Deeqdii Imaaraadka ugu deeqay abaaraha oo lagu iibinayo suuqyada Muqdisho
Deeqdii Imaaraadka ugu deeqay abaaraha oo lagu iibinayo suuqyada Muqdisho
Gargaarka la xado maaha wax ku cusub Soomaaliya, laakiin waxaa nasiib xumo ah in deeqdii Imaaradka ugu deeqay dadka abaaruhu saameeyeen ee uu sida rasmiga ah ula wareegey Ra’iisal Wasaare Rooble in si aan qarsoodi ahaynin loogu iibinayo Suuqayada magalaada Muqdisho iyo qaar kamida gobolada dalka.
Ma aha wax la qarinaayo in deeqdii Imaaraadka lagu iibinayo suuqyada magaalada Muqdisho. Way fududahay in la aqoonsado gargaarka bini’aadantinimo ee la musuqmaasuqay marka calanka deeq bixiyaha oo ka muuqdo deeqaha hadana la iibinayo, laguna iibinayo meel aan ka fogaynin xafiiska Ra’iisal Wasaare Rooble.
Bishii Janaayo ayaa dowladda Imaaraadka Carabta acunto iyo dawo ugu deeqday dalka Soomaaliya.
Previous articleQoraalka loo tiiriyey Alshabaab Uma Eka Qoraalladoodii ee Villada ayaa ka dhex muuqata.
Next articleCabdiwali Gaas oo magaaladda Doha shirar qarsoodi ah kula galay sirdoonka Qatar? Maxaa is badalay?